काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ३९ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ३९ सय ७२ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । बिहिबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ हजार ९ सय ७२ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ३ हजार एक सय ६३ जना, ललितपुरका २ सय ४२जना र भक्तपुरका ५ सय ६७ जना रहेका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ९ हजार ७० जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ६८ हजार ५ सय ८० पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा २७ सय ७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ९२ हजार ४ सय ९० पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बैशाख २३, २०७८ बिहिवार १८:११:०३ बजे : प्रकाशित